အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေး - Fury လမ်းမကြီး APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေး - Fury လမ်းမကြီး
အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေး - Fury လမ်းမကြီး APK ကို
ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုဂိမ်းသင်သည်အစဉ်အမတိုင်မီမြင်ကြပြီဆိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Fury လမ်းမကြီး - အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေး။ ဒါကပြိုင်ကားပေမယ့်တစ်ဦးသေနတ်ပစ်တဦးတည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပေါင်းစပ်နှစ်ခုနီးပါးမဖြစ်နိုင်သင်အတားအဆီးနှင့်အခြားအေးမြစိန်ခေါ်မှုများကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလမ်းအပေါ် playing.While ပြိုင်ကားရပ်တန့်ဖို့စေသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, ဒီအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ဝယ်ယူမှုအောင်မရှိဘဲမွေ့လျော်နိုင်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကားကိုလက်နက်ကိုစိတ်ကြိုက်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်အတူဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်အသစ်ရဲ့ချွတ်ပြပါနှင့်ကားတစ်စီးတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုပြုကြပြီဘယ်အချိန်မှာထို့နောက်ပြိုင်ပွဲကိုချွတ်သို့သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်။
ပါဝါ ups ဖမ်းပြီးကူးခုန်နေချိန်မှာသင်ကဥပမာအားဖြင့်ဒုံးခွင်းဒုံးများနှင့်အတားအဆီး, Dodge ကျပန်းဒုံးကျည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်: မြှင့်တင်ရန်, ခုံတန်းရှည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ပြိုင်ဘက်အပေါ်နောက်ထပ်အားသာချက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသံလိုက်စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်း features တွေ
- Arcade အဆုံးမဲ့ပြေးပြိုင်ကားဂိမ်း
- ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူကားတစ်စီး: ပြိုင်ကားသမား, Titan, Destroyer, X ကိုအလင်းပေးခြင်း, အာကာသစစ်ဘုရင်
- Daily သတင်းစာဆုလာဘ်များနှင့်အပတ်စဉ်ဆုကြေးဇူးကိုကုဒ်
- လက်နက်နှင့်သံချပ်ကာ Upgrade ။
- တိကျတဲ့ features တွေနှင့်အတူအပိုဆောင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ
- Card ကိုစုဆောင်းပြီးပိုဆုကြေးငွေမရ
အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေးများအတွက်အဆင်သင့်ရယူပါ! ရုံ Download ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မျောစတင်ပါ။
[F ကို] ကျွန်တော်တို့ကို ollow: https://www.facebook.com/RiotWarHighway/
လုံလောက်သောဆုလာဘ်ရဖို့ထိရောက်စွာ + ပျက်စီးခြင်းသူဌေး။
+ Fix bug ကို။
အဓိကရုဏ်းစစ်ပွဲအဝေးပြေး - Fury လမ်းမကြီး
49.10 ကို MB
android ဖုန်း အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး ဂိမ်း